2018 ခုနှစ်အတွက် Playstore ပေါ်ကအကောင်းဆုံး App များ (Part-4) – AsiaApps
2018 ခုနှစ်အတွက် Playstore ပေါ်ကအကောင်းဆုံး App များ (Part-4)
December 27, 2018 WaziynFeaturesNo Comment on 2018 ခုနှစ်အတွက် Playstore ပေါ်ကအကောင်းဆုံး App များ (Part-4)
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ 2018 ရဲ့အကောင်းဆုံး app များ review ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့ part-4 ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ Playstore ရဲ့အကောင်းဆုံး app ခေါင်းစဉ်လေးခုမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုအဖြစ် Best Daily Helper ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ app ငါးခုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။ Best Daily Helper ဆိုတဲ့အတိုင်း 2018 တစ်ခုလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့စဉ်သုံး application လေးတွေကိုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်။ ဘယ်ကောင်လေးတွေကဆုရရှိသွားလည်းဆိုတာအောက်မှာဆက်ကြည့်ပေးပါဦး။
See also – Best apps (part 1, part 2, part 3)
1. Otter Voice Notes
2018 တစ်နှစ်လုံးရဲ့အကောင်းဆုံး daily helper လို့ပြောရမယ့် app လေးဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးအသံတွေကိုစာသားအဖြစ်ပြောင်းလဲမှတ်သားပေးတဲ့ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေ၊ စာသင်ခန်းတွေနဲ့ အင်တာဗျူးတွေမှာပြောသမျှအသံတွေကိုမှတ်သားပြီး notes ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Playstore မှာသာမကပဲအခြား နည်းပညာအဖွဲ့အစည်းတွေကပါအသိအမှတ်ပြုရတဲ့ app လေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတစ်ကယ်လည်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက တစ်လမှာတစ်ခါ မိနစ် ၆၀၀ သာ free အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပိုသုံးချင်ရင်တော့ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Download link – Android/ iOS
Tasty ဆိုတဲ့ app လေးကတော့နာမည်ကြီး food channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tasty ရဲ့ offical andriod application လေးဖြစ်ပါတယ်။ အစားအစာပြုလုပ်နည်းအသစ်အသစ်တွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Tasty ရဲ့ video တွေကို app ထဲကနဲ့အဆင်ပြေပြေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အခု app ထဲကနေ Tasty ရဲ့ video တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခြား video channel တွေထက်အစောဆုံးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. Sift : Get automatic refund when price drop
ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအသုံးပြုဖို့သိပ်အဆင်မပြေသေးပါဘူး။ သူက credit card နဲ့ငွေပေးချေမှုတွေကိုမှတ်သားပြီးကိုယ်ဝယ်ယူစဉ်ကထက်ဈေးကျသွားတဲ့အခါမှာအလိုလျောက် refund ပြန်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကောင်လေးပါ။ အခြားနိုင်ငံတွေရဲ့နေ့စဉ်အသုံးပြုမှုမှာအဆင်ပြေတဲ့အတွက် best daily helper အဆင့် ၃ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သုံးဖို့အဆင်မပြေတဲ့အပြင် playstore မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် offical download မရတဲ့အတွက် link မထည့်ပေးတော့ပါဘူး။
4. Canva: Post,banner,card maker & graphic design
Mobile ပေါ်မှာ graphic design ဆွဲတာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးနာမည်ကြီးတာကတော့ Canva app လေးဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတွဲစပ်တာတွေ၊ စာလုံးဒီဇိုင်းတွေအပြင် အခြားဒီဇိုင်းအတော်များများကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့စွယ်စုံ app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခြား app တွေထက်သာလွန်သွားတာကတော့ Canva မှာ free tamplate ပေါင်း ၆၀၀၀၀ ကျော်ပါဝင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ User အများစုဆီက positive feedback များရရှိခဲ့ပြီး playstore ကလည်း best daily helper app အဖြစ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
5. Notion – Notes,Tasks,Wikis
Notion ဆိုတဲ့ app လေးကတော့ note မျိုးစုံကိုမှတ်သားထားနိုင်တဲ့ applicaton လေးဖြစ်ပါတယ်။ Note တွေအပြင်နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်ရမယ့် task တွေကိုပါမှတ်သားအချက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Note တွေမှတ်သားတဲ့နေရာမှာလွယ်ကူအောင် app ရဲ့ UI ကိုလည်းချောမွေ့အောင်ပြုလုပ်ပေးထားပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့အမျိုး ၂၀ ကျော်တဲ့ note အမျိုးအစားတွေကို မှတ်သားနိုင်တဲ့အပြင် Windows, Mac စတဲ့ platform တွေပေါ်မှာပါတစ်ပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Playstore ရဲ့ 2018 အကောင်းဆုံး App တွေကို short review လုပ်ပေးတဲ့ article serie ကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်လာမယ့် article တွေမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသုံးဝင်တဲ့ app လေးတွေကိုရှာဖွေပြီး review လုပ်ပေးသွားမှာမို့ဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။
Android, Google, iOS, Smartphone app
iOS Version နိမ့်တဲ့ Device တွေမှာ App Store က Download လုပ်မရတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနည်း
2018 ခုနှစ်အတွက် Playstore ပေါ်ကအကောင်းဆုံး App များ (Part -3)
View all posts by Waziyn →
ဓာတ်ပုံထဲကို လှပတဲ့ filter လေးတွေပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းနိုင်မယ့် Fade It
Samsung Galaxy S9 နဲ့ S9+ ဆီစတင်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Android Pie update